Kedu fim kacha mma na akụkọ ihe mere eme nke sinima? | Nye m oge ntụrụndụ
Ihe nkiri kacha mma
Paco Maria Garcia | | Nkatọ ihe nkiri
O doro anya na Ịmepụta ndepụta ihe nkiri kacha mma n'akụkọ ihe mere eme bụ ihe gbasara onwe ya. Na sinima, dị ka nka ọ bụla na -etu ọnụ na ọ bụ, ahụmịhe nke iche echiche dị iche na onye ọ bụla. Ihe maka ụfọdụ bụ ọ enjoyụ na ọ joyụ, maka ndị ọzọ ọ nwere ike bụrụ ihe dị iche.
Otú ọ dị, enwere ọmarịcha nka na -ewepụta otu obi. Fim ndị na -enwe nnabata na nkwado zuru ụwa ọnụ.
na Ihe nkiri Oscar na-emeri, Goya na ihe ndị yiri ya bụ ihe kacha mma. Ma ọ bụ ma ọ dịghị ihe ọzọ na tiori. Otu ihe a na -emetụtakwa ndị meriri ihe nrite ndị juri nke otu n'ime ememme klaasị A ise.
Ọ bụ ezie na ajọ mbunobi ụfọdụ maka teepu na -aga nke ọma n'ahịa, enwere ụfọdụ ngọngọ ndị dị ịtụnanya n'ezie. Ndị ọzọ bụ ndị ọha na -eleghara anya kpamkpam wee bụrụ akụ zoro ezo, dị maka ịnụ ụtọ mmadụ ole na ole.
Ndepụta nwere fim kacha mma na akụkọ ihe mere eme nke sinima enwere ọtụtụ, niile dị mma. N'ebe a, anyị na -atụpụta otu, ahaziri n'enweghị usoro ntozu ọ bụla.
1 The Samurai asaa, nke Akira Kurosawa (1954)
2 Ịgba nkịtị nke ụmụ atụrụ, site n'aka Johnathan Demme (1991)
3 Tiger and Dragon, nke Ang Lee (2000)
4 The Battleship Potemkin, nke Sergei M. Eisentein (1925)
5 Jaws, nke Steven Spielberg dere (1975)
6 Psycho, nke Alfred Hitchcock (1960)
7 The Exorcist, nke William Friedkin (1973)
8 Snow White, nke Pablo Berger dere (2012)
9 Onye omenkà, nke Michel Hazanavicius (2011)
10 Nwa nwoke ahụ, nke Charles Chaplin (1921)
11 N'ime, site na Pete Docter (2015)
12 Akụkọ Toy nke 3 nke Lee Unkrich (2010)
13 Ili nke Ọkụ, nke Isao Takahata (1988)
14 Ịchekwa Ryan nkeonwe site n'aka Steven Spielberg (1998)
15 Na nne gị kwa, nke Alfonso Cuarón (2001)
16 Mepee anya gị, nke Alejandro Amenábar (1997)
17 Obodo Chukwu, nke Fernando Meirelles (2002)
18 Oké Osimiri N'ime, nke Alejandro Amenábar (2004)
19 ET Extra-Terrestrial nke Steven Spielberg (1982)
20 Batman nke Tim Burton (1989)
21 Ihe nkiri ndị ọzọ kwesiri ka ha so na fim kacha mma n'akụkọ ihe mere eme
The asaa samurainke Akira Kurosawa dere (1954)
Es otu n'ime ọrụ ihe nkiri sinima kacha emetụta na akụkọ ntolite ụwa. Kurosawa gbanwere site na ihe nkiri a, ụzọ ịkọ na iduzi akụkọ ihe omume. Onye mmeri nke Ọdụm Silver na Venice Film Festival.
Nkịtị nke ụmụ atụrụnke Johnathan Demme dere (1991)
Ihe nkiri emere n'okpuru igwe azụmahịa Hollywood, mana ya na ya ogo dị enweghị mgbagha.
Ihe ịma aka na -egosi site na ihe nkiri dị na ya Jodie Foster na Anthony Hopkins ha na -ekerịta ihe nkiri ahụ, ọ bụ ihe ịtụnanya.
Onye mmeri nke 5 Oscars, nke atọ n'akụkọ ihe mere eme iji merie isi ise: Ihe nkiri, Onye na -eme ihe nkiri, Onye na -eme ihe nkiri, Ntuziaka na ihe nkiri.
Agụ na dragọnnke Ang Lee dere (2000)
Onye nduzi Taiwanese Ang Lee gbanwere sinima ịgba egwu ("Wuxia" n'asụsụ Chinese) na ọrụ choreographic a. Na mgbakwunye na inwe ọtụtụ ihe nrite (Oscar maka Ihe Nkiri Asụsụ Mba Ọzọ kacha mma), ọ bụ ihe ịga nke ọma na ndị na-ege ntị gburugburu ụwa.
Ọgbọ agha Potemkin, site n'aka Sergei M. Eisentein (1925)
N'ịdị elu nke usoro iwu Russia, otu edemede nke gbanwere ụzọ ịmụ akwụkwọ, Eisentein mere atụmatụ "asụsụ" nke ya gbasara sinima. Onye na -ese ihe nkiri ama ama na Russia gbawara nke ọma ọrụ nke montage cinematographic dị ka onye na -emepụta ihe.
Ihe fọrọ nke nta ka ndepụta niile nwere fim kacha mma n'akụkọ ihe mere eme gụnyere ihe nkiri a.
Nku azunke Steven Spielberg dere (1975)
Dabere na akwụkwọ akụkọ jaws (Jaws) nke Peter Bencheley dere. Ọmụmaatụ ọzọ na sinima azụmahịa adabaghị na mma.
Ọtụtụ na -eto onye isi Spielberg, na -eme ka ọ pụta ìhè ike ịkụnye ụjọ na ndị na -ege ntị, na -enweghịdị igosi nnukwu anụ.
Aha pụrụ iche maka ụda ụda nke John Williams dere.
Ọrịanke Alfred Hitchcock dere (1960)
Tupu Spielberg na Williams, Alfred Hitchcock na Bernard Herrmann guzobere duo na mepụta obi abụọ site na nchikota onyonyo na -atụ aro. Anyị agaghị echefu ma ọ bụ egwu pere mpe n'ime ihe mejupụtara ya, yana mmetụta na -enye nsogbu.
Onye Ọchụchụ, site n'aka William Friedkin (1973)
Ihe nkiri a sitere n'akwụkwọ aha ya bụ William Peter Blatty, onye dekwara edemede maka teepu ahụ.
Na mgbakwunye na ịbụ otu n'ime fim kacha mma na akụkọ ntolite, ọ bụ otu n'ime ndị kacha enye nsogbu maka ọtụtụ ndị hụrụ fim n'anya.
Blancanieves, site na Pablo Berger (2012)
Ihe nkiri sinima nke Spanish nwekwara òkè ya na ndepụta a. Ndị Nkwupụta sitere n'aka onye isi Basque Pablo Berger, bụ ịlaghachi n'ụdị "ochie" nke ịse ihe nkiri (ihe nkiri na -agbachi nkịtị, foto monochrome na egwu dị ka akụkọ akụkọ), iji mepụta ngwaahịa mbụ.
Ihe nrite pụrụ iche nke ndị juri na ememme ihe nkiri San Sebastián. O nwere nhọpụta onyinye Goya 18, merie 10, gụnyere Foto kacha mma.
Omenkà, site na Michel Hazanavicius (2011)
Es otu n'ime ihe nkiri kacha enye onyinye n'ime afọ iri gara aga. Onye mmeri dị ka ihe nkiri kacha mma na nturu ugo Oscars, Bafta na Cesar, n'etiti ndị ọzọ. Ma ọ bụ ọrụ Hazanavicius bụ ihe nkiri French kacha enye onyinye niile.
con ihe karịrị nde dollar 130 e welitere, ọha nke ọtụtụ ụwa mechakwara nyefee onwe ha n'ụkwụ teepu a.
Nwa okoro ahụNke Charles Chaplin dere (1921)
Otu n'ime ihe nnọchianya na -arụ n'ime ihe onyonyo mara mma nke Charles Chaplin.
N'ikwekọ n'ụdị ya, onye na -ese ihe nkiri Britain mepụtara ọrụ ya kacha mma n'ime ụlọ ọrụ Hollywood na -amalite amalite. Oge nke a, ọ na -ejikọ nke ọma agwakọta ụfọdụ nsogbu mmekọrịta mmadụ na ihe ọchị na -enweghị isi na nke na -emeghị ihe ọjọọ.
Gbanweenke Pete Docter (2015) dere
Ọ ga -eju ọtụtụ ndị anya itinye fim a na -eme ihe nkiri n'etiti fim kacha mma na akụkọ ntolite. Ka o sina dị, uru akụkọ Docter dị n'ịmegharị usoro echiche n'ụzọ doro anya. Nakwa n'ụzọ na -atọ ụtọ.
Toy Story 3site na Lee Unkrich (2010)
Afọ 1995 ga -adịgide na akụkọ ihe mere eme nke sinima dị ka otu n'ime afọ ndị ahụ akara akara tupu na mgbe ọ gachara. Iji okwu onye na -ede ederede, ọ na -anọchite anya oge mgbanwe. N'etiti afọ iri gara aga nke narị afọ nke XNUMX, Egwuregwu Akụkọ, ihe nkiri a na -emegharị emegharị na -arụ ọrụ kpamkpam site na kọmputa.
Na -enweghị ihe ndọpụ uche site na nka nka nke ọrụ John Lasseter, ntozu oke nke franchise ga -abata na 2010 na mmalite nke akụkụ nke atọ.
E buliri ihe karịrị otu ijeri dọla gburugburu ụwa, ha na -aza ajụjụ nzaghachi ọha.
Ọkụ ọkụnke Isao Takahata (1988)
Anime ndị Japan nwekwara ebe n'etiti ihe nkiri kacha mma na akụkọ ntolite. "Ihe nzuzu" nke eserese na -arụ ọrụ dị ka ntọala maka akụkọ na -egosipụta nzuzu agha. A na -ahụta ya dị ka otu n'ime fim kachasị ike agha.
Chekwaa Ryan nkeonwenke Steven Spielberg dere (1998)
Ndị ọzọ ihe nkiri agha n'ime usoro nke Agha IIwa nke Abụọ, n'agbanyeghị na oge a na mpaghara French.
Agbanyeghị na akụkọ ihe nkiri a enweghị ike ịtụ anya, Adreesị Spielberg dị egwu, yana ọrụ ime ihe nkiri Tom Hanks na egwu John Williams, kwesịrị ebe nke ha na ndepụta a.
Mama gị kwa, site na Alfonso Cuarón (2001)
na mbuli elu na ọdịda nke oge uto, ọkachasị ihe gbasara mmekọahụ, E kwuru na ụda ọchị. Ụfọdụ akụkọ anwansị Latin America dị ka ndabere. Ọ bụ akụkọ na -anaghị ahapụ nsogbu mmekọrịta mmadụ na ibe ya na akụ na ụba nke mba Aztec.
Ndị na -ese okwu bụ Diego Luna, Gael García Bernal na Maribel Verdú. Ọ bụ ihe nkiri kacha mma nke Cinema New Mexico.
Meghee anya gi, site na Alejandro Amenábar (1997)
Ndụ nwere ike bụrụ nrọ na -akwụghachi ụgwọ na udo. Ọ nwekwara ike bụrụ nrọ kacha dị egwu. Ihe efu, ekworo na agụụ ihe ọjọọ, nnukwu mmehie nke na -arụ ọrụ dị ka ihe nrịanwụ na hel.
Mgbe ihe ịtụnanya nke Amenábar nọchiri anya ya Nkọwapụta, ihe nkiri ihe nkiri nke abụọ ya na -egosi ụdị tozuru oke na enweghị mgbagha.
Obodo Chukwu, site n'aka Fernando Meirelles (2002)
Ihe nkiri sinima Latin America nwere ọtụtụ nsogbu mmekọrịta mmadụ na ibe ya na ihe nkiri a na -eme na mpaghara ndị kacha daa ogbenye nke nnukwu obodo.
Agbanyeghị, ọrụ Meirelles, nke lekwasịrị anya na nnukwu favelas nke Rio de Janeiro, dị ọhụrụ. Na ekele a ihe ngosi nke na -ajụ nka nka, mana jikọtara ya na ijikwa etiti na ndezi dị oke egwu.
Nhọpụta anọ nke Oscar, gụnyere Ntụziaka Kachasị Mma. Onye mmeri Bafta maka edezi kacha mma.
N'ime oké osimiri, site na Alejandro Amenábar (2004)
Ihe nkiri ọhụrụ Amenábar na ndepụta anyị nwere ihe nkiri kacha mma na akụkọ ntolite.
Dabere na ndụ onye edemede Galician Ramón Sampedro, onye mgbe ọ gbasịrị quadriplegic lụrụ ọgụ maka mbibi nke euthanasia. Ọ kwukwara na ndị bịara "igbu onwe" enweghị ikpe maka mpụ ọbụla.
Oscar maka ihe nkiri kacha mma n'asụsụ mba ọzọ. Nhọpụta iri na ise na nturu ugo Goya, na -emeri ihe onyonyo iri na anọ, gụnyere ihe nkiri kacha mma, onye ntụzi na onye na -eme ihe nkiri (Javier Bardem).
ET onye ọbịanke Steven Spielberg dere (1982)
Ihe nkiri Spielberg nke atọ na ọkwa a, na -egosi ikike ya na enweghị ike ịgọnahụ ya, na -eleghara ike ime ego anya.
Maka ọtụtụ ndị nkatọ, ọ bụ ihe nkiri Sci-Fi kacha mma oge niile. Nhọpụta itoolu Oscar, gụnyere ihe nkiri kacha mma na onye ntụzi. N'ikpeazụ, ọ nwetara ihe nrite anọ, n'etiti nke ụda ụda kacha mma (John Williams) pụtara.
Batmannke Tim Burton dere (1989)
na mpe mpe akwaMaka ịkpọasị Steven Spielberg, onye weere ha dị ka ihe na -ewu ewu, ọ bụghị naanị na ha na -ekpocha igbe igbe. N'ọnọdụ ụfọdụ ndị nkatọ na -emekwa ha.
Mgbe Superman site n'aka Richard Donner (1978), ihe nkiri mechara mezie subgenre a bụ kpọmkwem Batman.
Tanto ọnọdụ gbara ọchịchịrị nke Burton mepụtara, dị ka egwu Danny Elfman dere, ka na -eitatedomikwa ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ 30 ka e mesịrị.
Ihe nkiri ndị ọzọ kwesiri ka ha so na fim kacha mma n'akụkọ ihe mere eme
Ọtụtụ ihe nkiri dị mma nke ekwesịrị ka etinye n'ime ha adịghị na ndepụta a. Chineke nna M na II nke Francis Ford Coppola dere dịka ọmụmaatụ. Ndụ Pi y Brokeback Mountain site Ang Lee ma ọ bụ Ihe na-egbukepụ egbukepụ nke Stanley Kubrick dere. Ọzọkwa egwu dị ka La, La, Ala nke Damien Chazelle dere. N'ime nrụpụta Spanish, ọ ga -adị mkpa ịgbakwunye Kee m nke Pedro Almodóvar dere, Ụlọ nke Pan's Labyrinth site na Guillermo del Toro na Mụ mgbei Juan Juan Bayona gbara ya.
Isi ihe onyonyo: YouTube / HobbyConsoles / Akwụkwọ akụkọ New York Times / joshbenson.com
Pathzọ zuru ezu na edemede: Nye m oge ntụrụndụ » Cine » Nkatọ ihe nkiri » Ihe nkiri kacha mma
Egwu ga -elekwasị anya
Ihe nkiri 2018